Ntorobịa Volunteer Njem | Akụkọ Njem
Njem Ndị Ọrụ Afọ Ofufo
Carmen Guillen | | Afrika, Cabo Verde, General, njem
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ mgbe ụfọdụ ịme ọrụ afọ ofufo na mba ofesi mana ịgaghị anwa anwa ịme ya, ikekwe nke a bụ ohere gị. Taa anyị na-ewetara ke ibuotikọ emi ọtụtụ ohere nke ndị ọrụ afọ ofufo na-eme njem. N'ebe ụfọdụ, ọnụ ahịa ịnyefe ga-adị na akaụntụ gị ma na ndị ọzọ ọ ga-abụ n'efu, ma njem ahụ ma ọnụnọ gị.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ha iji tụlee nhọrọ nke afọ ofufo na ezumike ọzọ gị, nke a bụ ohere gị. Gbanye nhọrọ ndị a nke ọma na anyị na-amam na-ekpebi!
1 WWOOF (ohere dị n'ubi na gburugburu ụwa)
2 Ndị ọrụ afọ ofufo Conservation si Australia na New Zealand
3 Ọrụ afọ ofufo
4 Ọrụ afọ ofufo na Cape Verde maka nchekwa nke mbe
5 Ọrụ afọ ofufo maka United Nations
WWOOF (ohere dị n'ubi na gburugburu ụwa)
WWOOF bụ ụzọ dị mma iji mee njem dịtụ ọnụ ala nke bụkwa ahụmịhe mmụta mmụta dị egwu.
Maka enyemaka gị na ugbo nke ị họọrọ (ị nwere nnwere onwe ịhọrọ) inye nri na ebe obibi. Dabere na ugbo ahụ, ị ​​ga-enwe ohere ị wepụta onwe gị site na otu izu ọrụ ruo ọtụtụ afọ (dabere na mmasị na nnweta gị).
Na WWOOF ha nwere ọtụtụ puku ugbo 53 mba dị iche iche. Chetakwa, ị họrọ ugbo ị chọrọ ịga. Ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ a, ị ga-akwụ ụgwọ maka njem ahụ.
Maka ama ndị ọzọ, hụ na ịga n’okpuru ebe a njem Ntuziaka.
Ndị ọrụ afọ ofufo Conservation si Australia na New Zealand
Ọ bụrụ na okwu gbasara gburugburu ebe obibi masịrị gị, atụmatụ a nwere ike ịmasị gị. Site na weebụsaịtị www.conservationvolunteers.com.au ha na-enye usoro nke obere-oru ngo ma n'Australia, New Zealand na mba ndi ozo. Ebumnuche nke imekọ ihe a ga-arụ ọrụ dị ka otu otu chebe ebe obibi ma kwalite eco-tourism.
Otú ọ dị, ọrụ afọ ofufo a adịghị ka nke gara aga, ebe a ma ọ bụrụ ị nwere ụgwọ ụfọdụ ị ga-akwụ: ụlọ na nri ihe dị ka $ 40 Australian dollars kwa abalị (ma ọ bụrụ na ọnụnọ gị dị mkpụmkpụ), na site $ 208 Australian dollar kwa izu n'ihe banyere oru ngo na na oge na-aga.
Ulo obibi a gha adi ụlọikwuu ma ọ bụ ụlọ ndị eji arụ ọrụ.
Kedụ maka ịkụziri Bekee na / ma ọ bụ Spanish na Sudan? Ọ bụ oru ngo ha na-amalite site na weebụsaịtị www.svp-uk.org/ na n'oge a, ndị ọrụ afọ ofufo ga-achọ iji ohere a mee ihe ga-ekpuchi nnyefe ha (ma ọpụpụ ma laghachi) ma ebe obibi ha g foodwere kwa nri.
Ozi gị ga-abụ ịkụzi Bekee na / ma ọ bụ Spanish na emepe emepe emmepe. Dabere na ndị rụburu ọrụ dị ka ndị ọrụ afọ ofufo na ebe ndị a, ọ bụ ozi na-enye afọ ojuju na nke mmetụta uche, n'ihi na ị na-enye ụfọdụ ohere maka ụmụaka na-enweghị oke ego n'okwu ndị dị ka agụmakwụkwọ ma ọ bụ ahụ ike.
Ihe omume afọ ofufo a ga-adị mma maka ịkụziri ụmụ akwụkwọ, ndị nwere mmasị na ụmụaka yana ọrụ ọrụ ịkụzi.
Ọrụ afọ ofufo na Cape Verde maka nchekwa nke mbe
La ahịhịa mmiri na-acha akwụkwọ ndụ Ọ bụ otu n'ime ụdị dị egwu, dị ka ndepụta nke International Union for Conservation of Nature bipụtara. Ya mere, na Cape Verde ha na-anwa ịrụ ọrụ niile nwere ike iji chekwaa ụdị a mara mma. Na Biodiversidade oru ngo bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-enweghị ego na-arụkọ ọrụ na ọrụ nchekwa ndị a.
Ha na-achọ ndị ọrụ afọ ofufo ugbu a site na ebe ọ bụla n'ụwa iji nyere ha aka n'oge ọkọchị a (nke bụ oge akwụ mbe). Site na weebụsaịtị ha ha na-agba onye ọ bụla chọrọ ịgbakwunye ahụmịhe ọrụ na nchekwa, na-ezumike na ọrụ ha, "ma ọ bụ na-achọ naanị iji oge ezumike ha mee ihe dị mkpa."
Ọrụ gị ga-abụ:
Kpachara anya n'akụkụ osimiri n'abalị igbochi dinta.
Mee Ọrụ ubi tinyere nkpado na okpu.
Nest nchughari na ogwugwu onu.
Ọnụnọ gị ga-anọ na ogige ndị ọzọ nwere oge ezumike n'ụlọ. Ga-arụ ọrụ gị ụbọchị isii n'izu ma na ụbọchị n'efu ị nwere ike ịchọpụta agwaetiti ahụ, nwee egwuregwu mmiri ma ọ bụ zuru ike ma zuru ike.
Maka ọrụ afọ ofufo a, ha na-arịọ ka ndị nyocha ahụ zute usoro chọrọ:
Ezi ọdịdị anụ ahụ, na mgbakwunye na ike uche inwe ike ịnagide usoro nlekọta kwa ụbọchị.
Nwere ọ dịkarịa ala afọ 18.
Ghọta asụsụ Bekee edepụtara ma kwuo.
Ike idi na-achọ ọnọdụ ma gbanwee maka ibi ndụ na ndị mmadụ sitere na mba dị iche iche.
Nzukọ a M ga-ekpuchi ebe obibi gị na nri gị na oge itinye akwụkwọ na-emeghe n'ime afọ.
Ọrụ afọ ofufo maka United Nations
Nationstù Mba Ndị Dị n'Otu na-enyekwa ohere ịbụ onye ọrụ afọ ofufo, na-arụkọ ọrụ na ha na oru mmepe na mmepe aku na uba, dị ka ụfọdụ ndị meworo ọdachi ndị na-emere onwe ha n'oge na-adịbeghị anya.
Ezubere mmemme ka ọkachamara ọkachamara (ndị dọkịta, ndị nkụzi, ndị ọrụ ọkụ, ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ, wdg), mana n'ezie ọ bụrụ n'ịchọ n'etiti ohere ị ga-enye, ị ga-ahụ nke ga-adabara gị na mkpa gị.
Y’oburu adventurous, mmụọ nkwado na mmume egbula oge a iji nọrọ ezumike ezumike dị iche. Will ga arụ ọrụ, nyere aka na imekorita ndị mmadụ si n'akụkụ ụwa niile, yabụ ogo afọ ojuju nke ahụmịhe ị ga-ebi ebe ahụ karịrị obi ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Cabo Verde » Njem Ndị Ọrụ Afọ Ofufo
Na nkebi nke ọ bụla ị ga-ahụ njikọ ị nwere ike pịa iji nweta ozi ịchọrọ.
Igloos dị na Europe ibi ndụ dị ka Eskimos maka ụbọchị ole na ole
Omenala na ọdịnala ndị Indoneshia